China Chii chatinofanira kuita kupokana neCOVID 19 Vatengi | Guanglei
Kumba Mhepo Kunatsa
Mudiki Mhepo Inonatsa
Mota Mhepo Inonatsa
Chii chatinofanira kuita kupokana neCOVID 19
Tose tinoziva kuti vanhu pasi rese vari kuzobayiwa majekiseni ekudzivirira COVID 19. Izvi zvinoreva here kuti takachengeteka zvakakwana mune ramangwana? Chaizvoizvo, hapana munhu anogona kuve nechokwadi chekuti patinogona kushanda nekubuda takasununguka. Tichiri kuona kuti pane nguva yakaoma pamberi pedu uye tinofanirwa kucherechedza kuzvidzivirira mumba nekunze.
Chii chatinofanira kuita ikozvino?
1. Tora mushonga we COVID-19 nekukurumidza sezvaungagone kana zvichibvira. Kuronga yako COVID-19 yekudzivirira kusangana, shanyira vanodzivirira vachengeti pamhepo kuronga mabasa. Kana iwe uine mubvunzo nezve kuronga chirongwa chako chekudzivirira bvunza mupi wekudzivirira zvakananga.
2. Pfeka chifukidzo kumeso kana uri kunze kunyange iwe unowana jekiseni rako. Covid-19 haizonyangarika munguva pfupi, kukuchengetedza iwe nemhuri yako mushe, kupfeka chifukidzo kumeso kana kunze kuchinyanya kudikanwa.
3. Shandisa mhepo yekuchenesa mumba. Semamiriro ekufema, COVID-19 inopararira kuburikidza nemadonhwe. Kana vanhu vakasvota kana kukosora, vanoregedza madonhwe emvura mumhepo ine mvura, mamota, uye hutachiona hutachiona. Vamwe vanhu vanobva vafemera mumadonhwe aya, uye hutachiona hunovatapurira. Iyo njodzi yakanyanya kwazvo munzvimbo dzakatsvikinyidzana dzemukati nemhepo isina mweya. Pazasi pane yakakurumbira Mhepo yekuchenesa ine HEPA firita, anion uye UV sterilization.
1) HEPA kusefa zvinobata zvinobata zvidimbu saizi (uye diki kwazvo kupfuura) hutachiona hunokonzera COVID-19. Nekwaniso ye0.01 micron (10 nanometer) uye pamusoro, mafirita eHEPA, sefa maficha mukati mehukuru hwemazana e0.01 micron (10 nanometer) uye pamusoro. Utachiona hunokonzera COVID -19 ingangoita 0.125 micron (125 nanometer) muhupamhi, iyo inowira zvakaenzana mukati meiyo size-saizi renji iyo HEPA mafirita anotora neinoshamisa kushanda.
2) Kushandiswa kweiyoni inonatsa muMweya Inonatsa inobatsira mukudzivirira kwakanaka kwefuruwenza inopfuudzwa nemhepo.Ionizer inogadzira ioni dzisina kunaka, ichipa madonhwe emhepo / madonhwe eerosol zvisina kunaka uye inovakwezva nemagetsi kune yakakwenenzverwa mutero wevateresi. Chishandiso chinogonesa yakasarudzika mikana yekukurumidza uye yakapusa kubvisa hutachiona kubva mumhepo uye inopa mikana panguva imwe chete kuziva uye kudzivirira kutapuriranwa nendege kwemavhairasi.
3) Zvinoenderana nekutsvagurudzwa kwakasiyana, mwenje weUVC mwenje inouraya hutachiona uye hutachiona, uye parizvino inoshandiswa kudzora michina yekuvhiya. Kuenderera mberi kwekutsvagurudza zvakare kunoratidza kuti UV irradiation ine mukana wekutora pamwe nekusaita hutachiona hweSARS -COV pamwe neH1N1 uye nezvimwe zvinowanzoitika mabhakitiriya nemavirusi.
Chero chekuwedzera kufarira nezve mweya unonatsa, gamuchira kuti utibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo uye zvidzikiso.
Dongguan Guanglei Environmental Dziviriro Technology Co., Ltd.
(Fekitori) Yekutanga Kuvaka, Nha. 15 Dalingbian Road, Shahu Tangxia, Dongguan City, Guangdong Province, China.
Air Purifier For Home Tutirai , Sezvingatarisirwa Neutralizes Home Air Purifier , UV Home Air Purifier , Ozone Air Purifier Home dhepoti , Kumba Mhepo Kunatsa, Best Home Air Purifier Uk , All Products